वामपन्थले एक समग्र विचारधारा, एक मानवीय चिन्तन तथा एक प्रकारको जीवनशैलीको रूपमा आकार ग्रहण गर्‍यो । अतीतमा यसले राजनीतिभन्दा पनि सामाजिक संघर्षको चिनारी बनायो । यही कारण कोही–कोही मतदाता यो विचारधारासँग जोडिए वा नजोडिए पनि प्रगतिशील, मानवीय, सामाजिक र शैक्षिक सोच राख्ने अभियन्ताहरू वामपन्थी विचारसँग जोडिन पुगे । सांगठनिक ढाँचा ‘क्याडरबेस्ड’रह्यो । तर अब त्यस्तो छैन । जहाँ महँंगा गाडीको लाम छ, सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरिंँदै छ, महायज्ञको आयोजना हुँदै छ, त्यहाँ आँखा चिम्लिएर भनिदिए हुन्छ— यी सत्तारूढ हुँदाको मात लागेका नेता–कार्यकर्ता हुन् ।
नेकपा आफ्नै बुताले भन्दा पनि नेपाली कांग्रेस खुम्चिँदै गएका कारण सफल भयो । यतिखेर धेरैले नेकपाभित्रको स्वरलाई सानो निहुँबाट सुरु भएर बढ्दै जाने ठूलो समस्या ठानेका छन् । नेपालमा कम्युनिस्ट नामधारीको उदयलाई एक रहस्यका रूपमा परिभाषित गर्नेहरू पनि कम छैनन् । एकातर्फ कोही यसलाई सगरमाथाको देशमा लालझन्डा फहरायो भनेर गौरवगान गर्छन्, कोही यो पानीको फोहोराझैं आफै मेटिन्छ भन्छन् । यस प्रकार दुई विरोधी मूल्यांकन हुनुले के संकेत गर्छ ? अब यसमा अरूभन्दा पनि नेकपाका सत्तापोषणबाट वञ्चित प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूले सोच्नुपर्‍यो । शान्तिपूर्ण ढंगले समाज र राज्यमा रूपान्तरण ल्याउने सपना राखेर संघर्ष र समर्थन गर्दै आएका भुइँयोद्धाहरूले सोच्नुपर्‍यो । किनभने ओलीको सत्तालाई चुनौती दिनसक्ने अवस्थामा नेकपाभित्र कुनै नेता छैनन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गुटहरूबीचको द्वन्द्व छचल्किएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको उद्गार आयो, ‘आउने तीन वर्ष मै प्रधानमन्त्री रहन्छु ।’ यसो भनेर उनीआफ्नो प्रभामण्डलबाट भुइँतहका कार्यकर्ताहरू नटाढिऊन् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन् ।
नेकपाको सफलता र असफलताको मानक के हुने ? जुन चुनौती सामना गर्न यस शताब्दीको प्रारम्भमै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरियो, के त्यस दिशामा यसले सफलता पायो त ? नेपाली कम्युनिस्टको आफ्नै मोडल के हो ? उदार राजनीतिलाई अपनाएको हो भने ‘कम्युनिस्ट’ ब्रान्डकिन बोकिराख्नुपर्‍यो ? यी यस्ता सवाल हुन्, जसले तृणतहका यिनका परम्परागत मतदातालाई बेचैनीमा राखेको पाइन्छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन दलित वा अन्य वञ्चित समूहको पहिचानको लडाइँलाई सम्झिन चाहँदैन । उनीहरू मूलभूत रूपमा पहिचानको राजनीतिले, चाहे त्यो जातिका आधारमा होस् वा लिङ्गका आधारमा, वर्ग संघर्षलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने मान्यताबाट ग्रस्त छन् । पुनर्वितरणबाटै सबैलाई सामाजिक न्याय दिलाउन सकिन्छ कि आर्थिक रूपमा पिछडिएको, सामाजिक रूपमा वञ्चित र अपमानित गरिएकाहरूका लागि पहिचानजन्य गरिमाको लडाइँलाई प्राथमिकता दिएर सामाजिक न्याय दिलाउन सकिन्छ,यो अलमल नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नियति बनिरह्यो । अहिलेसम्म वामपन्थी नेतृत्वमा कथित उच्च जातिहरूकै कब्जा रहँदै आएको छ, त्यसमा पनि पुरुषको । यदाकदा देखिने समावेशी चेहरा त हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो । त्यसैले यिनीहरूको प्राथमिकतामा राजनीतिक संस्कृति बदल्ने कार्यसूची परेन ।
ओलीले दल बाहिरको विपक्षी कित्ता पत्तासाफ हुने अवस्था ल्याइदिएपछि दलभित्रका हस्तीहरू पनि थर्कमान छन् । अन्यत्रका कम्युनिस्ट शासकहरू जस्तै दलका नेताहरूको कमजोरीमा खेल्ने, राज्यसंयन्त्रलाई निरीह बनाउने र आफ्नो लहडलाई राष्ट्रको सपनाका रूपमा अर्थ्याउने ओली तौरतरिकाले मतादेशको आकांक्षा यतिखेर थिचिन पुगेको छ । संविधान निर्माणपछिको निर्वाचित सरकार अहिलेसम्मको सबैभन्दा खराब संस्कारको सरकारमादरियो । यसले उदार लोकतन्त्रको मर्मलाई मार्दै गएको छ । योसँग न त वामपन्थी सरकार हुनुको हौसला छ, न संसदीय राजनीतिको मूल्यलाई जोगाउने साहस छ । संघ र प्रदेशमा बहुमतको सरकार हुनासाथ राजनीतिक स्थिरता आउने व्याख्या गरिए पनि अब यो पद्धति नै सहज रूपमा बढ्न नसक्ने परिदृश्यहरू सुदूर क्षितिजमा देखिन थालेका छन् । र, नेकपाभित्र भुइँतहबाट प्रश्न गरिँदै छ, ‘के नेकपाले डिजर्भ गर्ने यति नै हो ?’ प्रकाशित : माघ २३, २०७६ ०९:००
वास्तोको सन्दर्भमा जोड्दै भन्न सकिन्छ— जसले पनि गान्धीको अन्त्य गर्न खोज्छ, ऊ ढिलो हुन जान्छ । गान्धी समयनिष्ठ थिए वा समयभन्दा अगाडि थिए । त्यसैले भन्न सकिन्छ, दुनियाँमा जहां कतै उनको खोजी गरिन्छ, उनी प्रेरणा दिन पुगेकै हुन्छन् । जहांकहीँ शान्तिपूर्ण अभ्यास हुन्छ, त्यहाँ गान्धीको नाम नलिइए पनि गान्धी उपस्थित भएकै हुन्छन् । यही हो, अहिले पनि गान्धी जीवित रहने कारण । त्यसैले कुनै पनि सत्ताले गोडसेको आवरणमा गान्धीको गोरेटोलाई निमिट्यान्न पार्न सक्दैन ।
प्रकाशित : माघ १६, २०७६ ०८:३४